आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र ०३ गते मंगलबार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १६ तारिख – SUDUR MEDIA
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र ०३ गते मंगलबार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १६ तारिख
March 16, 2021 AdminLeaveaComment on आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र ०३ गते मंगलबार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १६ तारिख
आज मिति २०७७ साल चैत्र ०३ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ मार्च १६ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । फाल्गुन शुक्लपक्ष । तिथि–तृतीया,३३ घडी २८ पला, बेलुकी ०७ बजेर ३८ मिनेट उप्रान्त चतुर्थी । नक्षत्र– अश्विनी,अहोरात्र । योग–ब्रम्ह,०३ घडी २२ पला,बिहान ०७ बजेर ३५ मिनेट उप्रान्त ऐन्द्र । करण– तैतिल,बिहान ०६ बजेर ४१ मिनेट उप्रान्त गर,बेलुकी ०७ बजेर ३८ मिनेट उप्रान्त वणिज । आनन्दादिमा–अमृत योग । चन्द्रराशि–मेष । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर १४ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर १२ मिनेट । दिनमान २९ घडी ५३ पला । सर्वार्थसिद्धियोग अहोरात्र ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने घर परिवार तथा आफन्तको साथ सहयोग पाईनाले मन प्रशन्न रहनेछ । समाजसेवामा समय दिन सक्दा मान तथा सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । बिलाशी तथा भौतिक सम्पति तथा बस्तुको प्रयोग मार्फत रमाईलो गरि दिन बिताउन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा समय दिनेहरुले भनेजस्तो सफलता हात लाग्नेछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समय राम्रो रहकोले अध्ययनमा मन जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । अध्ययनकै सवालमा लामो वा छोटो दुरिको यात्राको तय हुनेछ । अध्ययन वा कामको सवालमा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने समयले साथ दिनेछ । अग्रज तथा आफन्तको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । तरपनि खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) कामगर्ने सवालमा होसियार रहनुहोला काम बिगार्ने तथा तपाईको नकारात्मक सोच्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । आम्दानि हुँने ठाउँमा सत्रुका आँखा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । परिश्रको फल अरुलेनै हत्याउँन कोषिस गर्नेछन् । अध्ययनमा मन जानेछैन भने नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । दाजुभाईहरुको नराम्रा सल्लाह मान्दा काम बिग्रनेछ भने भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) नयाँ काम पाउँने तथा बढुवा हुँने योग रहेको छ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । समाजको मन जित्ने काम गर्ने अवसर जुर्ने हुँनाले मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । निर्णय क्षमतामा बृद्धि भएर जाने तथा कार्यालयमा तपाईको निर्णय क्षमताको उच्च कदर हुनेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) राजनिति तथा समाजसेवमा जनताको काम गर्दा गर्दै आलोचनाको शिकार हुनु पर्दा मन चिन्तित हुनेछ । कामहरु समयमा सम्पादन नहुदा आर्थिक रुपमा कमजोर भएको महशुष हुनेछ । सानो कामलाई पनि प्रशस्त समय खर्चिनु पर्नेछ भने सरकारि तथा प्रशासनिक काममा झन्झटिलो प्रक्रिया अपानाउँनु पर्दा न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । अध्ययनमा समय दिएपनि भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछैन ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) व्यापार व्यावासायमा अलि बढिनै समय खर्चिदा राम्रो मुनाफा कमाउँन सकिनेछ भने बित्तिय क्षत्रसँग सम्बन्धित लगानि फस्टाएर जाने ग्रहयोग रहेकोछ । पुराना बिवादित बिषयहरुको फैसला तपाईकै पक्षमा हुने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् भने तपाईप्रति सत्रुता राख्नेहरु आफै किनारा लाग्नेछन् ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)बिभिन्न अवसरहरुको सहि तरिकाले सदुयपोग गर्न सक्दा धेरै उपलब्धि हात पर्नेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने धनको भण्डार बढ्नेछ । बौद्धिकताको उपयोग गरि आफ्नो ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवार तथा जीवन साथिको सहयोगले एक किसिमको उत्साह जगाउनेछ । सुन्दर तथा बीलाशी पहिरनले व्याक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) लगनशिल तथा ईमान्दारिता पुर्वक गरिएको कामहरु सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न सकिनेछ भने आर्थिक रुपमा सबल हुँने समय रहेकोछ । बिशिष्ट व्याक्तिहरुको संगतले राम्रा तथा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई आफ्नै आखा अगाडि देख्न पाउँदा मन प्रशन्न हुनेछ । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला सामान्य मौषमि रोगको प्रकोप भने देखिन सक्छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) ईष्टमित्र तथा आफन्तको सल्लाहलाई शिरोधार्य गर्दै निर्णय आफै लिनुनै उत्तम रहेकोछ । पढाई लेखाईमा प्रसस्त समय खर्चिय मात्रा सफलता हात लाग्नेछ । माया प्रेममा एक अर्काको भावना नबुझ्दा नचाहादा नचाहादै एक अर्कासँग टाडिनु पर्नेछ । स्वास्थ्यले साथ नदिदा कामहरु नहुने तथा ढिला हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिुनहोला सामान्य चोटपटक लाग्न सक्छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्र बलियो रहने हुँनाले नयाँ कुराहरु पत्ता लगाउँन सकिनेछ । माया प्रेममा आफ्नो मायालुसँग दिनभरु सँगै रहेर भलाकुसारि गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । भौतिक सम्पति आकस्मिक लाभ हुनेछ भने बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) उत्पादन क्षेत्रमा समय लगानि गर्नेहरुले मनग्गे धन सम्पति कमाउँन सक्नेछन् भने थप लगानि गरि रोजगारिका अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ । खेलकुद तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित कामहरुबाट अपेक्षित नतिजा हात लगाउँन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुँने समय रहेकोछ भने आफन्त तथा गुरुवर्गहरुको सहयोगले पढाई लेखाईमा भनजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकिको सहकार्यमा राम्रा तथा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा दिईएको समयबाट भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले मन खुसि रहनेछ । साना साना कामबाट प्रसस्त आम्दानि हुने हुनाले व्यावसायमा थप लगानि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । आफन्त तथा आत्मिय मित्रका साथ रमाईलो बाताबरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेभएपनि स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्न सकिनेछ । बोल्दा ख्याल गर्नुहोला तपाईको भनाईलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । तपार्ईँको दिन शुभ रहोस् ।
भाइरल झांक्री र डीबी बीच सम्बन्ध बिग्रनुको कारण खुल्यो, डिबिले देखाए एक एक हिसाब ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
भाइरल झाक्री र डीबी बीच सम्बन्ध बिग्रनुको कारण खुल्यो, डिबिले देखाए एक एक हिसाब ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल भदौ ०९ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट २५ तारिख
एउटा रह’स्यमय घर ! यस्तो मिठो प्रेम ,३२ सन्तान, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल बैसाख २६ गते आईतबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे ०९ तारिख
आफ्नो पूर्वपतिले अर्को विवाह गर्ने खबर सुनेपछि मिना ढकाल आ’गो, मनोजले से’ क्सको लागि विवाह गर्न लागेको आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (3,500)
टिकटकमा भाइरल बनेकी राउटे युवतीलाई हो.टलमा लगेर यौ.न दु.र्व्य.वहार गरेको भिडियो बाहिरीएसंगै संलग्न ३ जना युवक प.क्राउ….. (2,366)
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (2,001)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,905)
आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. (1,738)
आजको राशिफल हेर्नुहोस: मिति २०७८ साल कार्तिक ०४ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अक्टोबर २१ तारिख
महाकाली नदीको बाढीले खतराको सतह नाघ्योः पहुँच मार्ग भत्कायो……
अविरल वर्षाले धानबालीमा ठुलो क्षति…..
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल कार्तिक ०३ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अक्टोबर २० तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल कार्तिक ०२ गते मंगलबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अक्टोबर १९ तारिख